Taariikhda My Butros » Ku celiska aheyd – Ma shukaansiga online si sax ah si ay u tagaan?
Haddii goor dhow aad u soo martay weyni ka a, waa shukaansi online jidkii toosnaa, inaan shabaqa? Laga bilaabo baxay adduunka shukaansi ka dib markii xiriir mararka qaarkood ma fududa. In aad ku celiska aheyd waa adag, laakiin talooyinkan halkan waa in lagugu badbaadiyo!
Ma dhahayo daadinaa wax walba oo ku saabsan xiriirka ee la soo dhaafay, laakiin la soo dhaafay xiriirka aad muuqaal darto in aad online. Dadku waxay rabaan inay ogaadaan haddii aad is furteen, kala, armalooyinka ah iwm. Oo waxay ku yidhaahdeen wax la mid ah, "Waxaan ahay cusub si shukaansi adduunka ugu online" waa caadi in la isticmaalo marka aad ku cusub tahay in ay. Qof walba ahaa cusub hal mar!
Sida offline dunida ka, shukaansi adduunka ugu online waxaa ka buuxa qishta, beenaalayaal, iwm. Ka taxaddar marka aad raadinaysid at profiles oo ka jawaabaya farriimo. Laga bilaabo baxay oo isagoo ku celiska aheyd keeni kartaa in uu noqdo aad u nugul in qof walba oo ku siin doona dareenka. Tani waxay keeni kartaa in dhibaato haddii aadan taxadir.
Ha siin macluumaadka oo dhan
Waxaa sabab adeegyada shukaansiga online sii badan oo wax qarsoonna. Trust Building in shaqsi ahaan qaadataa waqti. Qaado waqti si aad u hesho in la ogaado in qof ka hor inta aysan ogaan lambarka telefoonka aad sababtoo ah waxaad ka dib waxa ay ka shaleyso.
Ma Friend ah Fiiri kartiyo
Haddii aad tahay si dhab xiiso qof, iyo ku celiska aheyd, hubi saaxiib wanaagsan haddii doorashada aad samaynayso waa wanaagsan. Friends noqon kartaa waxashnimo daacad ka hor inta aanad qaladaad waa weyn.